छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन्, के हो कारण
जेठ ४, २०७६
काठमाडौं — प्रत्येक वर्ष इंग्ल्यान्ड र वेल्समा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् । किन त ?
सन् १८३८ मा रेकर्ड राख्न थालिएदेखि प्रत्येक वर्ष च्याँ गर्ने शिशुमा छोराकै संख्या बढी छ ।
यो एक वर्षको मात्र कुरा हैन । रानी भिक्टोरियाको शासनकालदेखि नै छोरीहरूको तुलनामा छोराहरू बढिरहेका छन् ।
सन् २०१७ मा इंग्ल्यान्ड र वेल्समा उदाहरणका लागि तीन लाख ४८ हजार ७१ छोरा जन्मिएकोमा तीन लाख ३१ हजार ३५ छोरी जन्मिए । यो भनेको १७ हजारजतिको फरक हो ।
प्रत्येक वर्ष जन्मिने छोरीको तुलनामा छोराको संख्यामा वृद्धिको यो संरचना लगभग १८० वर्षदेखि देखिँदै आएको छ ।
वास्तवमा प्रत्येक १०० छोरीमा १०५ छोराको जन्म अनुपातलाई सामान्यतया प्राकृतिक मानिन्छ ।
यो अनुपात चीन र भारत जस्ता देशमा बढी छ किनकि छोरालाई त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ ।
अचम्मको कुरा त, यो अनुपात १७औं शताब्दीदेखि छ ।
यो अनुपात किन अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा पूर्णतया बुझिएको छैन तर यससम्बन्धमा अनेकौं सिद्धान्त छन् ।
पहिलो सिद्धान्त विकासक्रममा आधारित छ । त्यसअनुसार, वयस्क अवस्थामा पुरुष र महिलाको संख्या बराबर बनाउनका लागि अलिक बढी पुरुषको जन्म हुनुपर्छ ।
त्यो किनभने पुरुष हुनु खतरनाक काम हो । महिलाका तुलनामा पुरुषको मृत्यु बालककाल र जीवनका अन्य चरणमा हुने सम्भावना बढी रहन्छ र यसमा दुर्घटना, जोखिम मोल्ने बानी, आत्महत्या र स्वास्थ्य समस्या कारणका रूपमा रहेका हुन्छन् ।
‘प्रत्येक उमेरमा जुनसुकै समय र स्थानमा महिलाभन्दा पुरुष मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ प्राध्यापक डेभिड स्टेनसाल्ज बताउँछन् । उनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा तथ्यांक विषयका एसोसिएट प्राध्यापक हुन् ।
यो सिद्धान्त अनुसार, त्यसैले जीवनको शुरूआतमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी हुनु भनेको वयस्क अवस्थामा पुरुष र महिलाको संख्या बराबर हुनु हो ।
वास्तवमा बेलायतमा वयस्क महिला वयस्क पुरुषभन्दा बढी नै रहेको र धेर बाँच्ने गरेको राष्ट्यि तथ्यांक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ ।
वीर्य र समय
महिलाको डिम्ब सेचन गर्नका लागि हुने दौडमा (वाई क्रोमोजोम बोक्ने) पुरुष वीर्य कि (एक्स क्रोमोजोम बोक्ने) महिला वीर्य पहिलो हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तत्त्व रहेका हुन्छन् ।
त्यसमा मातापिताको उमेर, महिलाको डिम्बोत्सर्जन चक्र, दबाबको स्तर र यौन आसन लगायत पक्ष पर्छन् ।
एक लोकप्रिय सिद्धान्त के पनि छ भने डिम्बोत्सर्जनभन्दा कैयौं दिनअघि यौनकर्म गर्दा छोरी पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । अनि त्यसपछि यौनकर्म नगर्दा बढी बाँच्ने तर पुरुष वीर्यभन्दा कम गतिमा पौडने महिला वीर्य बढी समय
यसको विपरीत डिम्बोत्सर्जनको समय वरपर यौनकर्म गर्दा राम्रोसँग पौडने वीर्य डिम्बमा छिटो पुग्छ र छोरा जन्मिन्छन् ।
मातापिताले यी तरिकाहरूको गुणगान गरेपनि वैज्ञानिकहरूले यस्ता कुराले फरक पार्ने विषयमा खासै प्रमाण नरहेको बताएका छन् ।
केही अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने मातापितामा दबाब हुँदा बढी छोरी जन्मिन्छन् भने युद्ध र द्वन्द्वका समयमा बढी छोरा जन्मिन्छन् ।
यौनकर्मलाई योजना बनाएर गर्दा लिंगनिर्धारणमा प्रभाव पार्दैैन भने गर्भाधानको समयमा केही अन्य क्रियाकलाप हुन्छ त ?
महिला र पुरुष उत्पादन गर्ने वीर्यको समान संख्या छ भने र लगभग उत्तिकै गर्भधारण हुन्छन् भने महिला भ्रूण बढी संख्यामा हराएर पुरुष भ्रूणलाई बढी संख्यामा राख्छन् ।
केही अनुसन्धानहरूले गर्भाधानको शुरूआतमा गर्भमै महिला बढी मर्ने सम्भावना हुने देखाएका छन् तर अन्य अध्ययनले पुरुष भ्रूण गर्भवती अवस्थाको अन्त्यतिर बढी कमजोर हुने र जन्मिनुअघि नै मर्ने देखाएका छन् ।
वैज्ञानिकहरूले ठ्याक्कै के हुन्छ र यसका कारण के हुन् भनी खुट्याउन गाह्रो हुने बताएका छन् ।
हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने पुरुष भ्रूणहरू बढी विकसित हुन्छन् र बढी पुरुष शिशु जन्मिन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको ध्रुवमा परिवर्तन आइ...
प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा बाँदर बसेपछि... (भिडियो)
नदीको सतहमा मज्जाले दौडियो हरिण (अद्भुत भिडियो)
दुई शार्कबीच भयंकर लडाइँ (भिडियो)
अहिलेको लडाईं कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने नै हो : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]
असार ११, २०७८
चरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार… !
तदर्थवादबाट मुक्त गर्दै कांग्रेसलाई यसरी दिन सकिन्छ पुनर्जीवन
रवीन्द्र मिश्रजी, पञ्चायती व्यवस्था नै फिर्ता ल्याउने कि ?
खोप, खोप र खोपका लागि देउवालाई शुभकामना
साउन ४, २०७८
मेलम्चीको महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै जोखिम न्यूनीकरणमा लागौं
असार ३, २०७८
कोरोना बढ्दै जाँदा सिसिएमसी बैठकः यस्तो छ निर्णय
दार्चुला घटनाको सत्यतथ्थ पत्ता लगाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
असोजसम्म एक करोड ८३ लाख ८२ हजार खोप आउने
पूर्वयुवराज पारसले सडकमा गरे ट्राफिक प्रहरीसँग लफडा
पिसिआर रिपोर्टका आधारमा कैदीबन्दी भेट्न निर्देशन
अवैधरुपमा मदिरा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने चिनियाँ पक्राउ
दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस मृत्यु दर म्यानमारमा
द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै पूरा गर्छाै– सेना